Nhau - Yese yepurasitiki yekupompa pombi uye inokonzeresa sprayer, kuitira kuti zuva nezuva pombi yekupuruzira uye trigger sprayer igone kudzokororwa
Rinokosha mafuta bhodhoro
Yese yepurasitiki pombi pombi uye inokonzeresa sprayer, kuitira kuti zuva nezuva pombi yekupuruzira uye trigger sprayer inogona kudzokororwa
Kubudirira kwenzanga yevanhu hakupatsanurike kubva ku ecology uye nharaunda. Apo isu tiri kukunda nyika uye kusimudzira nzanga uye tichiwana kukura nekukurumidza kwehupfumi, isu tinoperekedzwa nekupamba kwezvakatipoteredza nekuparadza kwezvakatipoteredza, izvo zvinokanganisa zvakanyanya hupenyu hwevanhu nekusimudzira. Kuvandudza nharaunda neecology uye nekuona kusimudzira kusimukira kwenzanga dzevanhu inyaya dzekukurumidzira uye mabasa ekutanga anotarisana nevanhu vemarudzi ese epasirese. Kubudirira kwakasimukira budiriro isingangogutse zvido zvevanhu venguva ino, asi isingakuvadze kugona kwezvizvarwa zvinotevera kuzadzisa zvido zvavo. Iyo inzira isingaparadzanisike iyo isingakwanise chete chinangwa chekusimudzira hupfumi, asi zvakare inochengetedza zviwanikwa uye nharaunda senge mhepo, mvura yakachena, gungwa, ivhu uye masango ayo vanhu vanovimba nawo kuti vararame, kuti zvizvarwa zvinotevera zviwedzere zvakaringana uye rarama uye shanda murunyararo.
Mapurasitiki ekuputira zvinhu zvezuva nezuva zvinodikanwandiwo akajairika muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Ivo vane akasiyana siyana ekushandisa uye yakakura huwandu. Zvinogona kutaurwa kuti mumwe nemumwe wedu ari kusangana navo nguva dzese, uye pfapfaidzo pombi chinokonzera sprayerndomumwe wavo. Maumbirwo echinyakare pombi pombi inonyatso kuzivikanwa kune wese munhu, iyo inoumbwa neyepombi kamuri, tambo chitubu, girazi bhora, pisitoni, wekudhinda musoro nezvimwe zvinhu. Pombi dzechinyakare dzinofanirwa kubvarura uye sarudza zvitubu zvematare, mabhora egirazi, uye akasiyana epurasitiki zvikamu mushure mekushandisa. Maitiro ekuti zvishandiswezve akaremerwa, uye mutengo wekudzokesa zvakare wakanyanya kwazvo. Kunyangwe iyo yekudzoreredza mutengo inodarika kukosha kwechigadzirwa, saka mazhinji echinyakare mapombi epombi anoshandiswa. Mushure meizvozvo, haigone kudzokororwa uye kuyerera munzvimbo yepanyama yatinogara, zvichikonzera kusvibiswa kwakachena kwakachena.
Kuchengeta ivhu, kuchengetedza ecology, uye kuchengetedza nharaunda, isu semugadziri tinofanirwa kutora chikamu chemutoro, kunyanya yedu yekupakata zvinhu zvinogadzira, tinofanirwa kushingairira kujoina chiito chekubvisa sosi yekusvibisa chena kubva kunobva, uye zvinobudirira uye nyatso kuvandudza marara ekugovera cheni. Yese yepurasitiki pombi pombi uye trigger sprayerndeimwe yezvigadzirwa zvinogadzirisa dambudziko rekuoma marara. Zvakanakirapombi rese repurasitiki uye ese epurasitiki trigger sprayer zvinotevera:
1. Hutsanana uye hwakachengeteka, mativi ese anogona kuve jekiseni akaumbwa nezvikafu-giredhi epurasitiki zvinhu, uye zvobva zvaungana zvakananga uye zvakavharwa. Zvichienzaniswa nemapombi echinyakare, zvinonyatso kudzivirira iyo yekufambisa kusvibiswa kwezvinhu zvakaita sematsime, magirazi mabhora, uye inorema simbi kusvibisa kwetambo zvitubu.
2.Kushanda, kugadzikana uye kugadzikana, echinyakare mapampu epombi anonetsa kudzivirira polyoxymethylene (POM) zvikamu nekuda kwematambudziko echimiro. POM iri nyore kuita nemakemikari senge iodine, uye kupisa kwakanyanya kunogona zvakare kugadzira magasi anokuvadza kuvanhu.Pombi dzese dzeplastiki Inogona kushandisa PP, PE uye zvimwe zvinhu zvine zvishoma kugadzikana zvinhu zvivakwa kuti unyatso kudzivirira matambudziko ari pamusoro.
3. Zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvinogadziriswazve, zvese zvikamu zve ese-epurasitiki pfapfaidzo pombizvikamu zvepurasitiki, zvese zvinoshandiswa zvinoenderana nemapurasitiki zvinogona kushandiswa, uye mhando imwechete yepurasitiki mbishi zvinoshandiswa zvakanyanya sezvinobvira, uye iyo yekudzokesa inogona kupwanywa zvakananga uye granulated. Iyo inodzivirira maitiro akaomarara uye anonetesa akadai sekushandisazve, kubvarura, kusarudzira uye kupatsanura, uye zvinonyatso gadzirisa dambudziko rekuoma marara.
Zvikamu Shanghai Rainbow Industrial Co., Ltd.. RB PACKAGE inokurudzira kuti tishande pamwe chete kubvisa kuoma kwekudzokororazve kwezvezuva nezuva zvinodiwa kurongedza zvinhu kubva kunobva, kuitira kuti zvigadzirwa zvekuputira zvatinogadzira zvirege kuyerera muchimiro uye zvigova zvinosvibisa nharaunda mushure mekushandisa, uye zvakakwana uye Rainbow Package inonyatso kuvandudza iyo marara cheni yezvinhu zvezuva nezuva zvinodiwa zvekutakura zvinhu! Kukurudzira kwakasimudzira, kune hutano uye kwakadzikama kukura kwekavha zvinhu pombi indasitiri! Shanghai Rainbow Industrial Co, Ltd ndiye mugadziri, Shanghai muraraungu pasuru Ipa imwechete-yekumira yekuzora yekupaka.
Post nguva: Jul-21-2021